Mmemme maka ịhazi ụdị draịva siri ike
Ezi ụbọchị. Enwere otutu otutu ajụjụ banyere ikuku diski (ma obu, dika ha na-ekwu HDD) (ma eleghị anya, otu n'ime ógbè kachasị). Ọtụtụ mgbe iji zuo otu nsogbu - diski diski ga-ahazi. Na ebe a, a na-ajụ ụfọdụ ndị ajụjụ ụfọdụ: "Oleekwa otú?
Ebee ka ịzụta obere draịva mpụga dị ala maka laptọọpụ / kọmputa?
Ekele ndị niile gụrụ akwụkwọ. Echere m na ọtụtụ (ma karịsịa ndị na-ese ọtụtụ foto, ndị nwere nnukwu nchịkọta nke egwu na ihe nkiri) echeworị echiche banyere ịzụta diski ike dịpụrụ adịpụ maka laptọọpụ (kọmputa). Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na ị jiri ya na diski ike mgbe niile, HDD na-enye gị ohere ọ bụghị naanị iji chekwaa ozi, ma na-enyefe ya ngwa ngwa site n'otu kọmpụta gaa na nke ọzọ, ọ bara uru iji obere igbe na njem gị, wdg.
Na otu n'ime isiokwu ndị mbụ, anyị nyere ngwá ọrụ ndị ga-enyere aka nweta ozi gbasara ngwaike na arụnyere na kọmputa gị. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ma chọpụta ihe ndabere nke ngwaọrụ? Iji mee nke a, enwere ụlọ ọrụ pụrụ iche nke na-anwale kọmputa gị n'oge na-adịghị anya, dịka ọmụmaatụ, onye nhazi, wee gosi gị akụkọ na ihe ngosi n'ezie (ule maka RAM).
Mmemme kachasị mma 10 kachasị mma iji mepụta diskigmentation diski ike
Iji melite arụmọrụ nke kọmputa site n'oge ruo n'oge kwesịrị iweghachite iwu na draịva siri ike. Ihe eji eme ihe na-enye gị ohere ịkwagharị faịlụ n'ime otu nkeji ka akụkụ nke otu ihe omume dị n'usoro n'usoro. Ihe a niile gbapụrụ kọmputa. Ihe ndị dị elu Top Disk Defragmenter software Disraggler Smart Defrag Auslogics Disk Defrag Disk Defraggler Smart Defrag Software Disk Disk Defraggler Smart Disk Defraggler Smart Disk Defraggler Smart Disk Defraggler Smart Disk Defraggler Smart Disk Defraggler Smart Defrag Software
Otu esi wepu nchekwa ederede site na USB flash drive (USB-flash drive, microSD, wdg.)
Ezi ụbọchị. N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-eji ụdị nsogbu ahụ bịakwute m - mgbe ị na-edegharị ozi na USB flash drive, njehie mere, ihe dịka ihe ndị a: "A na-edebe diski ahụ. Nke a nwere ike ime n'ihi ihe dị iche iche ma otu ụdị ngwọta adịghị adị.
Ndewo Ngwa SSD na-aghọwanye ndị na-ewu ewu na ụlọ ahịa nke ụbọchị ọ bụla. N'oge na-adịghị anya, echere m, ha ga-abụ ihe dị mkpa kama ịbụ ihe dị oké ọnụ ahịa (ọ dịkarịa ala ụfọdụ ndị ọrụ na-ewere ya dị ka okomoko). Ịwụnye SSD na laptọọpụ na-enye ọtụtụ uru: ngwa ngwa na-ejide Windows OS (oge ịgba ọsọ na-ebelata 4-5 ugboro), ndụ batrị ogologo oge, ụgbọala SSD bụ ihe na-eguzogide ọgwụ na mkpuchi, nkwụsị na-apụ apụ (nke na-eme mgbe ufodu na HDD disks).
Ike mbanye na - akwụsị: mgbe ị na - enweta ya, kọmputa ahụ na - efu maka 1-3 sekọnd, mgbe ahụ ọ na - arụ ọrụ nke ọma
Ezi ụbọchị niile. Otu n'ime ihe ndị na-adịghị mma bụ ndị nwere nkwonkwo siri ike: ị na-arụ ọrụ na draịvụ ike, oge ụfọdụ ka ihe niile dị mma, mgbe ahụ ị ga-enwetaghachi ya ọzọ (mepee folda ahụ, ma ọ bụ malite ihe nkiri, egwuregwu), kọmpụta ahụ kwadoro maka 1-2 sekọnd. . (n'oge a, ọ bụrụ na ị nụ, ị nwere ike nụ otú disk diski si amalite ịgbasa) na mgbe oge nke faịlụ ị na-achọ ịmalite ... Site n'ụzọ, nke a na - emekarị na diski ike mgbe ọtụtụ n'ime ha dị na usoro ahụ: usoro a na - arụ ọrụ nke ọma, ma nke abụọ kwụsịrị mgbe anaghị arụ ọrụ.
Nchoputa na ule nke disk diski. Usoro kachasị mma maka ịrụ ọrụ na HDD
Ezi ụbọchị. Diski ike - otu n'ime ngwaike kachasị mma na PC! Ịmara na ọ bụ ihe na - ezighị ezi na - ị nwere ike ijikwa ịnyefee data niile na mgbasa ozi ndị ọzọ n'enweghị ọnwụ. Ọtụtụ mgbe, a na-anwale disk diski mgbe achọtara diski ọhụrụ, ma ọ bụ mgbe nsogbu dị iche iche pụta: faịlụ a na-depụtaghachi ya ogologo oge, PC na-akwụ ụgwọ mgbe a meghere diski (nweta), ụfọdụ faịlụ kwụsị ịgụ, na ihe ndị ọzọ.
Diski ike disk (HDD), ihe ị ga-eme?
Ezi ụbọchị! Mgbe arụ ọrụ kọmputa na-adaba, ọtụtụ ndị ọrụ na-ege ntị na nhazi na vidiyo vidiyo. Ka ọ dị ugbu a, diski ike nwere mmetụta dị ukwuu na ọsọ nke PC, m ga-ekwukwa na ọ dị ịrịba ama. Ọtụtụ mgbe, onye ọrụ ahụ na-achọpụta na disk diski na-alalata (ọzọ na abb.
Ndewo, ezigbo na-agụ nke blog pcpro100.info! Taa, m ga - agwa gị otu ị ga - esi họrọ windo ike mpụga maka kọmputa gị, laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba. Ma họrọ onye ziri ezi, dịka mkpa gị, nakwa na ịzụta ahụ ga-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ. N'isiokwu a, m ga-agwa nuances niile nke ị na-ahọrọ draịva siri ike, tụlee n'ụzọ zuru ezu na njedebe ndị a ga-akwụ ụgwọ tupu ịzụrụ, na, n'ezie, m ga-achịkọta ọkwa maka ịdabere na gị.
Ịhọrọ otu SSD mbanye: nke bụ isi (olu, ịgụ / ide ọsọ, mee, wdg.)
Ndewo Onye ọ bụla chọrọ ka kọmputa ya rụọ ọrụ ngwa ngwa. N'ihe ụfọdụ, ngwa SSD na - enyere aka ịnagide ọrụ a - ọ bụghị ihe ijuanya na mgbasa ozi ha na - etolite ngwa ngwa (maka ndị na - adịghị arụ ọrụ na SSD - M na - akwado ịnwale ya, ọsọ ahụ dị ezigbo ụtọ, Windows na - ebudata "ozugbo"!
Ezi ụbọchị. Diski ike (nke a bụ HDD) bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke kọmputa ọ bụla ma ọ bụ laptọọpụ. A na-echekwa faịlụ ndị ọrụ niile na HDD ma ọ bụrụ na ọ daa, mgbe ahụ ịghachite mgbake bụ ihe siri ike ma ọ bụghị mgbe niile. Ya mere, ịhọrọ diski ike abụghị ọrụ dị mfe (M ga-ekwu ọbụna na mmadụ enweghị ike ime n'enweghị ezigbo ọdịda).
Ndewo Nke a bụ otu i si arụ ọrụ na diski ike, ọrụ, ma na mberede na-agbanye kọmputa ahụ - ma ị hụ foto ahụ na mmanụ: enweghị usoro, usoro RAW, enweghị faịlụ ọhụụ ma ị nweghị ike idetuo ihe ọ bụla na ya. Kedu ihe ị ga - eme na nke a (site n'ụzọ, enwere ọtụtụ ajụjụ n'ụdị a, na isiokwu nke isiokwu a mụrụ)?
Ezi ụbọchị niile. Ọ bụ ọrụ dị mkpa: wefe faịlụ dị ukwuu site na diski ike nke kọmputa ahụ na diski ike nke laptọọpụ (nke ọma, ma ọ bụ n'ozuzu ya, hapụrụ disk ochie ahụ na PC na enwere ọchịchọ iji ya na-echekwa faịlụ dị iche iche, ya mere, na laptọọpụ HDD, dịka iwu, enweghị ike) .
Ọ bụ ọtụtụ ihe kpatara ọsọsọ nke kọmputa nkeonwe. Oge nzaghachi na ọsọ nke usoro a bụ ọrụ nke nhazi na RAM, mana ọsọ nke ịkwaga, ịgụ na ịde data dabere na ọrụ nke nchekwa faịlụ. Ogologo ogologo oge na ahịa jupụtara na HDD-ebu, ma ugbu a, ha na-anọchi SSD.
Kedu ihe ping (ping) ma ọ bụ ihe mere egwuregwu netwọk ji egbochi? Esi ewelata ping
Oge dị mma! Echere m na ọtụtụ ndị ọkachamara, karịsịa Fans nke egwuregwu kọmputa na netwọk (WOT, Counter Strike 1.6, WOW, wdg), chọpụtara na mgbe ụfọdụ, njikọ ahụ na-etinye ihe dị ukwuu: - nzaghachi nke ndị edemede na egwuregwu na-abịa n'oge na-adịghị anya mgbe bọtịnụ bọtịnụ gị; foto dị na ihuenyo ahụ nwere ike imegharị; Mgbe ụfọdụ, a na-agbagha egwuregwu, na-eme ka njehie.
Anyị na-ebuli ma mee ngwa ngwa: otu esi ehichapụ kọmputa na Windows site na mkpofu
Ezi ụbọchị. Ma onye ọrụ ahụ ga-achọ maọbụ na ọ bụghị, n'oge na-adịghị anya, kọmputa Windows ọbụla na-emepụta ọtụtụ faịlụ faịlụ oge (cache, akụkọ ihe nchọgharị, faịlụ ndekọ, faịlụ tmp, wdg). Nke a, ọtụtụ mgbe, a na-akpọ ndị ọrụ "ihe mkpofu." PC amalite ịrụ ọrụ nke ọma karịa oge karịa: ọsọ nke mepee folda na-ebelata, mgbe ụfọdụ, ọ na-eche maka 1-2 sekọnd, diski diski na-aghọkwa ohere n'efu.
Kedu esi lelee diski ike maka arụmọrụ, bedy (usoro Victoria)?
Ezi ehihie N'isiokwu nke taa, m chọrọ imetụ n'obi kọmputa - diski ike (site na ụzọ, ọtụtụ ndị na-akpọ onye na-arụ ọrụ ahụ obi, mana m onwe m echeghị otú ahụ.) Ọ bụrụ na nhazi ahụ na-ere ọkụ, ịzụta ihe ọhụrụ ma enweghi nsogbu ọ bụla, ọ bụrụ na draịvụ ike ahụ na-ere ọkụ, mgbe ahụ enweghi ike ịchọta ozi ahụ na 99% nke ikpe). Kedu mgbe m ga-achọ ịlele diski ike maka arụmọrụ na ajọ ọrụ?
SSD disk ndụ: nnyocha. Esi chọpụta oge SSD ga-arụ ọrụ
Ezi ụbọchị. Isiokwu metụtara SSD (windo-steeti mbanye - siri ike-steeti mbanye), n'oge na-adịbeghị anya, ezigbo ewu ewu (o doro anya na ọ na-emetụta nnukwu ọchịchọ maka ndị ọrụ dị otú ahụ). Site n'ụzọ, ọnụahịa ha na oge (echere m na oge a ga-abịa n'oge na-adịghị anya) ga-adị ka ụgwọ nke diski ike (HDD) mgbe niile.
Otu esi eme nhazi nhazi nke diski diski, ihe ngosi flash
Ezi ụbọchị! N'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga-eme nhazi nhazi nke diski ike (dịka ọmụmaatụ, iji "gwọọ" ọjọọ HDD ndị ọzọ, ma ọ bụ iji wepuchaa ozi niile site na ụgbọala, dịka ọmụmaatụ, ị na-ere kọmputa ahụ ma chọghị ka onye ọ bụla gwuo n'ime data gị). Mgbe ụfọdụ, usoro dị otú ahụ na-emepụta "ọrụ ebube", na-enye aka mee ka disk ahụ dịghachi ndụ (ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, igwe-agba ọkụ, wdg.